के तपाई जुठो र बासी खानेकुरा फाल्नुहुन्छ ? त्यसोभए यसो गर्नुस् – MediaNP
काठमाडौँ । हामी प्राय दैनिकजसो खाएर बाँकी रहेको जुठो र बासी खानेकुरा फ्यकिरहेका हुन्छौँ । जुन खानेकुरा हामी डस्बिनमा हालेर होस् या अन्य ठाँउमा जथाभावी मिल्काउछौँ । त्यतिमात्र होइन् , हामी होटल तथा रेष्टुरेन्टमा गएर पनि आफुले खानेभन्दा दोब्बर खानेकुरा मगाएर फ्याक्छौँ ।
त्यस्तै अर्कोतिर भोजभतेर र चाडपर्वमा पनि धेरै खानेकुरा पकाएर बाकी रहेको खानेकुरा फ्याक्ने गछौँ । किनभने हामीलाई आफुले खाइरहेको खानेकुराको मुल्य र महत्व थाहा हुदैँन् । झ्न किसानको मेहनत र पसिना त हामीले विर्सिनै सक्यौँ ।
जसले गर्दा हामीले फालेको खानेकुराले वातावरणलाई प्रदुषण गरी मानिसहरुमा विभिन्न प्रकारका घातक रोगहरु लागिरहेको हुन्छ । किनभने फालिएका खानेकुरा सडेर त्यसमा झिगाँ र साङ्ला घुमी दुर्गन्ध फैलन्छ । यसरी कुहिएपछि उक्त खानेकुराबाट मिथेन ग्यास पैदा हुन्छ । यो ग्यास कार्वनडाइअक्साइड भन्दा २१ गुणा बढी हानिकारक हुन्छ ।
तर हामी आफुलाई चेतनशील प्राणी ठान्छौ । यदि चेतनशील प्राणी हो भने त्यही खानेकुराको सही व्यवस्थापन गर्न जाने कति राम्रो हुन्थ्यो । नेपालमा भएको एक अध्ययन अनुसार हामीले आफ्नो थालमा राखेकामध्ये ३५ प्रतिशत खानेकुरा जुठो बनाएर नष्ट गरिरहेका हुन्छौ । जसमध्ये नेपालमा बर्षेनी पाँच लाख टन खाना यसैगरी नष्ट हुने गरेको जनाएको छ । तर विश्वमा ८ सय ४२ मिलियन मानिस खानेकुराबाट बञ्चित छन् ।
त्यसोभए जुठो र बासी खानेकुरा के गर्ने त ?
घरमा बासी र जुठो खानेकुरा सडेगलेर जानुदिनु भन्दा अन्य कार्यमा व्यवस्थान गर्न सकिन्छ । किनभने यो खानेकुरा हामी घरपालुवा जनावर कुकुर , विरालो , गाईभैसी र चराचुरुङ्गीलाई दिन पनि सक्छौँ । किनभने तिनीहरुलाई पनि मानिसहरुलाई जस्तै खान चाहिन्छ ।
अर्थात कुहिएर खान अयोग्य भइसकेको छ भने त्यसलाई मल बनाउन सकिन्छ । जुन मल खेतबारीमा प्रयोग गरेर आफ्नो उत्पादनमा वृद्धि गर्न सकिन्छ । जसले वातावरण पनि फोहोर हुदैन् । बासी र जुठो खानेकुराको पनि व्यवस्थापन हुन्छ ।